रुरुले पायाे प्रिमियममा आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति , एक कित्ताकाे कति पर्छ ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyरुरुले पायाे प्रिमियममा आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति , एक कित्ताकाे कति पर्छ...
रुरुले पायाे प्रिमियममा आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति , एक कित्ताकाे कति पर्छ ?
रु रु जलविद्युत परियोजनालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियममा आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले प्रिमियम मूल्यसहित ८ करोड ९६ लाख ९५ हजार २२० करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो । अब परियोजनाले सर्वसाधारणलाई जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात ४ लाख ७ हजार ७०६ कित्ता सेयर प्रतिकित्ता १२० रुपैयाँ (२० रुपैयाँ प्रिमियम) का दरले निष्कासन गर्नेछ ।
त्यसैगरी, स्थानीयको लागि जारी पुँजीकै १० प्रतिशत अर्थात ४ लाख ७ हजार ७०६ कित्ता सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले पनि निष्कासन गर्नेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबि क्यापिटलले गर्नेछ । इक्रा नेपालले रु रु जलविद्युत परियोजनालाई ग्रेड ३ रेटिङ दिएको छ ।
कम्पनीले पाएको ग्रेड ३ रेटिङले औषतमा राम्रो भएको देखाउँछ । रु रु जलविद्युत परियोजनाले गुल्मीको माथिल्लो हुग्दी खोलामा ५ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । यो आइपीओ गुल्मीका आयोजना प्रभावितले भर्न पाउनेछन् । माथिल्लो हुग्दीले २०७१ चैतदेखि विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ ।
Previous articleइन्फ्रान्सटक्चरकाे आइपिओ डिम्याट खातामा , कति छ ओपनिङ रेन्ज ?
Next articleपाटनढोकामा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन प्रवेश निषेध